Fursadii Ugu Dambeysay Ee Is Diiwaan Gelin: Aqoon Isweydaarsi Maalin Badh Ah Berri | Martech Zone
Monday, June 16, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan rajeyneynaa inaan la hadlo asxaab wanaagsan oo wanaagsan, oo ay ku jiraan Kyle Lacy, halkan Indianapolis berrito aqoon isweydaarsi ah: Xiriirinta Bulshada ee Internetka ee Adiga iyo Ganacsigaaga.
Subaxu wuxuu ku bilaaban doonaa: Maxay shabakadaha bulshadu u yihiin qaabab isgaarsiin xoog leh ganacsiga iyo shabakadaha bulshada ee ugu fiican ganacsigaaga iyo yoolalkaaga waxaa soo bandhigtay Sarah “Indheergaradnimo”Robbins.
Amniga iyo Badbaadada - Heer noocee ah nabadgelyo iyo badbaado ayaad ku leedahay shabakad bulsheed?
Joogtaynta Magacaaga - Sideed ugu ilaalinaysaa sumaddaada shabakadda bulshada? Sidee Boolis ugu tahay
Shabakadaha Bulshada ee Gudaha - Sidee loo adeegsadaa shabakadaha bulshada si wada hadal looga dhex abuuro shaqaalahaaga gudaha?
Saameynta khadka tooska ah - Sidee loo cabiraa saameynta suuqgeynta ay ku leedahay bulshada qadka toosan maxayse kuu sheegi kartaa?
Baraha bulshada iyo warbaahinta kale - Sideed iskugu dhafan kartaa shabakadaha bulshada iyo warbaahinta kale ee bulshada?
Hands on Session - Abuur shabakad bulsheed kuu gaar ah adiga oo kaashanaya shaqaalaha MediaSauce.
Maalinta ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa dood wadaag, Difaaca Sumcaddaada Online. Hadaad jeceshahay inaad isdiiwaangaliso, waxaad sida ugufiican kuugu heysaa badhidaada qalab!